Maxaa kala soctaa dowladaha isku xil qaamay xalinta qilaafka Sacuudiga iyo Qadar | TOP NEWS
Maxaa kala soctaa dowladaha isku xil qaamay xalinta qilaafka Sacuudiga iyo Qadar
Dowladaha carabta ayaa isku biirsanaaya xalinta Khilaafadka ka dhex oogan wadamada Sacuudiga iyo Qadar oo muddooyinkaani ku kala fogaa Siyaasada.
Dowladaha Carabka ee ku baxay xalinta Khilaafadka labadaasi wadan ayaa waxaa qeyb ka ah dowlado African ah balse ku manasa sheegtay Carabta, halka dowladahaasi ay kaabayan dowlado kale oo ka duulaya khilaafka
Inta la xaqiijiyay waxaa xalinta Khilaafadkasi ku baxay ilaa dhowr dal oo ay kamid yihiin Sudan, Kuwait, Muritania, Turkiga, Somalia, Syria, Cuman, Urdun, Lubnaan, Tunis, Aljeria, Jabouti, Moroco iyo dalal kale oo aad uga careysan khilaafka taagan.
Dowladaha aan kor kusoo xusnay qaarkood ayaa durba wufuud u kala diray Sacuudiga iyo Qadar, kuwaa oo kulamo kala duwan la qaadanaya Amniirka Qadar iyo Boqorka Sacuudiga oo ay dhextaalo xiisada ugu badan.
Wadamada reer Galbeedka ee sheegay inay doonayaan inay dhex dhexaadiyaan xiisadan u dhaxeysa Sacuudiga, Imaaraadka iyo Qatar, ayaa waxaa sidoo kale kamid ah Farance, Swedan, Britain iyo Talyaniga.
Xalinta Khilaafka ayaa soo degdegtay kadib markii ay soo shaac baxday xiisada ka dhexeysa labada dal oo ay qeyb ka noqdeen Dalalka Imaaraatiga, Baxreyn, Liibiya iyo Yemen oo sheegay inay xiriirkii u jareen Qatar.
Geesta kale, Dalalka ururka Khaliijka kamid ahaa ee Kuwait iyo Cumaan ayaa iyagu diiday inay Sacuudiga iyo Imaaraadka ku taageeraan in go’adoon la geliyo dalka Qatar.
Maxaa kala soctaa dowladaha isku xil qaamay xalinta qilaafka Sacuudiga iyo Qadar added by Tifaftiraha Somalida Maanta on June 10, 2017